﻿	diaphragmအမြှေးပြားဟာ ထည့်သွင်းရ ပြန်ထုတ်ရ သိပ်ခက်နေရင် ဘာလုပ်ရမလဲ? | Find My Method
diaphragmအမြှေးပြားဟာ ထည့်သွင်းရ ပြန်ထုတ်ရ သိပ်ခက်နေရင် ဘာလုပ်ရမလဲ?
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ » အမြှေးပြား » diaphragmအမြှေးပြားဟာ ထည့်သွင်းရ ပြန်ထုတ်ရ သိပ်ခက်နေရင် ဘာလုပ်ရမလဲ?
ဒါဟာ အလေ့အကျင့်ရရင် ပိုလွယ်ကူသွားနိုင်ပါတယ်။ သုံးစွဲနည်းအပိုင်းကို မဖတ်ရသေးဘူးဆိုရင် အဲဒါကို အရင်ဖတ်ကြည့်ပါ။
အလုပ်မဖြစ်သေးဘူးလား။ အလေ့အကျင့်လဲ မရလာပါဘူး ဆိုရင် ကိုယ်ထဲထည့်သွင်းစရာမလိုတဲ့ နည်းကို ရွေးချင်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ ခြားခံပါတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုခုကို စွဲသုံးနေချင်ရင်တော့ ကိုယ်ထဲထည့်သွင်းစရာမလိုတဲ့နည်း (အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံးလို)ကို သုံးစွဲကြည့်ပါ။
အခြားနည်းလမ်းသုံးမယ်-implant; IUD; condom; ကပ်ခွာပြား; ဆေးလုံး ; အဝိုင်းကွင်း; ထိုးဆေး
CHIJIOKE, M. K. (2016). SPERMICIDES AND DIAPHRAGMS. UNIVERSITY OF BENIN CITY: DEPARTMENT OF HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL EDUCATION. မှရယူရန် https://www.academia.edu/24646826/SPERMICIDES_AND_DIAPHRAGMS